Drafitra transatlantika JetBlue natao hanakorontanana ny tsena
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Drafitra transatlantika JetBlue natao hanakorontanana ny tsena
JetBlue dia napetraka tsara hanararaotana amin'ny fitakiana fisondrotan'ireo mpandeha amin'ny tetibola aorian'ny COVID-19
JetBlue dia nametraka ny fahitany amin'ny famoahana vola amin'ny mpivarotra tanàna be atao indrindra eto an-tany
Ny tsena transatlantika dia mila fifaninanana mora vidy
Ny ankamaroan'ny mpitatitra dia manolotra saran-dalana ifotony, fa ny JetBlue kosa manolotra azy ho fenitra
Ny fandefasana andrana ny làlambe transatlantika voalohany an'ny JetBlue dia nampipoitra fahalianana be dia be ary mety hanana fahombiazana lehibe.
Miaraka amin'ny kilasy fandraharahana MINT vaovao sy ny sarany mora vidy dia hatolotra tsara ny mpitati-bola amin'ny fitakiana avo lenta avy amin'ireo mpandeha amin'ny teti-bola aorian'ny COVID-19.
JetBlue dia nijery ny fandefasana vola amin'ny mpivady tanàna be olona indrindra eran'izao tontolo izao: New York mankany London. Na izany aza, ny fifandonana dia nirongatra talohan'ny areti-mandringana tamin'ity lalana ity, na izany aza, ny saran-dalan'ny JetBlue ambany dia hanome tombony azy - indrindra ny fanamarihana ny fisintahan'ny Norveziana Air tamin'ny sidina lavitra ary ireo orinasam-pitaterana an'habakabaka hafa eny an-habakabaka dia mahita fidinan'ny fahaiza-manao. Ireo hetsika ireo dia hahasoa ny JetBlue hananganana toeran-tsena.
Betsaka ny mpanjifa no nanjary voafatotra vola, ary ny tsena transatlantika dia mila fifaninanana mora vidy. Ny fanadihadiana farany momba ny fanarenana COVID-19 dia nampiseho fa ny 87% n'ireo mpamaly manerantany dia miahiahy ny amin'ny toe-bolany manokana.
Ny ankamaroan'ny mpitatitra dia manolotra saran-dalana ifotony, fa ny JetBlue kosa manolotra azy ho fenitra. Ny fitoviana amin'ny fanolorana ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, ampiarahina amin'ny serivisy fisakaizany sy ny saran-dalany mifaninana, dia hahita ny zotram-pitaterana ary handresy ireo mpanjifa izay mety nahemotra ny diany noho ny fitomboan'ny olana ara-bola.
Ny valim-panadihadiana nataon'ny indostrialy farany teo dia nanambara fa ny 44% amin'ireo namaly dia nilaza fa hihena be ny tetibolan'ny orinasan'ny orinasan'izy ireo mandritra ny 12 volana ho avy vokatry ny areti-mandringana COVID-19.
Ireo mpitsangatsangana ara-orinasa dia mety hahita ny JetBlue ho safidy mety sy mora kokoa amin'ny manaraka. Ny vidiny ambany dia hahita ny zotram-piaramanidina manintona mpizahatany orinasa miasa ho an'ny orinasa lany teti-bola. Ny kilasy fandraharahana MINT vaovao sy ny haavon'ny serivisy avo lenta dia hamela ny seranam-piaramanidina hifaninana amin'ny kianja filalaovana amin'ny mpitatitra efa misy. Ity fandresena fandresena ity dia hahita ny JetBlue ho lasa mpitatitra mampikorontana izay mety hanetsiketsika ny tsenan'ny dia transatlantic orinasa.
Na izany aza, sahirana i JetBlue hahazoana vola azo antoka amin'ny London Heathrow. Ny UK manitatra ny wavier slot 'fampiasana-azy na very-it' dia nametraka sakana tamin'ny drafitry ny mpitatitra. Na dia niantoka slot vitsivitsy tao Gatwick sy Stansted aza izy, ny fisarahana serivisy dia manampy ny vidin'ny asa sy ny fahasarotana tadiavin'ny kaompaniam-pitaterana. Raha azon'ny JetBlue antoka ny toerana tadiavina ao Heathrow, dia ho mpanakalo lalao ho an'ny toeran'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka io. ”
32 no maty, 66 no naratra tany Egypt